Xasan Shiikh Maxamuud oo tagay magaalada Kismaayo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaJubalandXasan Shiikh Maxamuud oo tagay magaalada Kismaayo
December 5, 2016 Puntland Mirror Jubaland, Somalia 0
Xasan Shiikh Maxamuud oo gaaray magaalada Kismaayo ee xatunta maamulka Jubbaland. [sawirka: Archive]
Kismaayo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa maanta oo Isniin ah gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland.
Madaxweynaha iyo wefdiga la socday ayaa waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed islaam iyo saraakiil kale oo katirsan Jubbaland.
Lama oga ujeedada rasmiga ah ee safarka madaxweynaha Kismaayo, balse waxaa loo malaynayaa in ay xiriir la leedahay arrimo olole.
Magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland ayaa noqotay meel ay diirada saaraan murashixiinta madaxweyna Soomaaliya, dhammaan murashixiinta madaxweynaha ayaa booqanaya halkaas si ay uga ololeystaan.
Asbuucii lasoo dhaafay, waxaa halkaas tagay Raysulwasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake si uu kulamo ula yeesho xubnaha aqalka hoose iyo aqalka sare ee Jubbaland kasoo jeeda.
Xasan Shiikh Maxamuud ayaa doonaya in mar labaad loo doorto madaxweynaha Soomaaliya.
Cape Town-(Puntland Mirror) Dukaamo ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed ayaa lagu gubay dalka Koonfur Afrika, kuwo kalena waa la boobay. Dhibaatada ayaa ka dhacday magaalada Mbkweni ee gobolka Western Cape. Magaalada ayaa waxaa ka socda mudaaharaadyo [...]